सनीलाई टक्कर दिँदै नतालिया
आफ्नो हट लुक्स र प्रस्तुतिका कारण बलिउडमा चर्चामा आउँदै गरेकी अभिनेत्री सनी लियोनलाई टक्कर दिन ब्राजिलियन मूलकी नतालिया कोर बलिउडमा आएकी छन्। जोन अब्राहमको फिल्म ‘रक्की हेण्डसम’लाई नतालियाले उत्तेजक किसिमको पोल डान्स गरेकी छन्।...
‘डन’ सँग हिरोइनको बिहे
काठमाडौं, ३१ असार । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा बिहेको लहर सुरु भएको छ । महानायक राजेश हमालले ५० वर्षको उमेरमा बिहे गरेलगत्तै अन्य पाँच चर्चित कलाकारले समेत धमाधम बिहे गरिसकेका छन् । निर्देशक अनुप बरालले...
हिरोइनलाई दिएन अमेरिकाले भिसा
नायिका सुमिना घिमिरेले विविध प्रक्रिया अपनाउँदा पनि अमेरिकाले भिषा दिन इन्कार गरेको छ । सुमिनाले नेपालीहरूले आयोजना गर्न लागेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि अमेरिकी दूतावासमा भिषा आबेदन गरेकी थिइन् । तर, नेपाली कलाकारमाथि...
सुनिता दुलाललाई बिहेका लागि फकाउने को को ?
काठमाडौं । वर्ष २०७१ ले नेपाली संगीत र फिल्म क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा पुर्र्यायो, यसको मूल्यांकन वर्षको अन्त्यमा होला। तर यो वर्षले यसै क्षेत्रमा लागेका कलाकारलाई भने कतिको फाइदा पुर्र्यायो, त्यसको मूल्यांकन वर्षको शुरुवात देखिनै...
हिरोइनले खुल्लेआम अन्डरवेयर देखाइदिँदा अरुलाई पो लाज…
पटपकटक अन्डरवेयर खुस्किँदा समेत थाहा नपाउने नेपाली हिराइन बनेकी छिन्, प्रियंका कार्की । पछिल्लोपटक उनको एउटा यस्तो हविगत देखियो । विहिबार काठमाडौंमा चलचित्र नाई नभन्नु ल २ को सफलताको उपलक्ष्यमा आयोजना भएको कार्यक्रममा नायिका...
किन केपी ओलीतिर लागे बद्री पंगेनी ?
काठमाडौँ, २७ असार । नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि नेकपा एमालेको राजधानीम जारी नवौँ महाधिवेशनमा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली चुनावी मैदानमा प्यानल नै बनाएर ओर्लिनुभएको...
यसरी हिट भयो सन्नी लियोनको उत्तेजक नृत्य (भिडियोसहित)
बलिउडकी बेबी डल सनी लियोनले नृत्य गरेको ‘पिंक लिप्स’ले सफलता पाऊदै गएको छ। जुलाई २ तारिकमा यु ट्युबमा अपलोड गरिएको सनीको विन्दास नृत्य रहेको भिडियो हेर्नेको संख्या १५ लाख नागी सकेको छ। फिल्म ‘हेट...
भनिन्छ, विवाह पछि मान्छेको भाग्य नै खुल्छ। तर बलिउडकी डर्टी गर्ल विद्या वालनका लागि भने यो भनाई फलिफाप नै भएन। गत शुक्रबार रिलिज भएको उनी अभिनित फिल्म ‘बोबी जाशुस’ले बक्स अफिसमा फ्लप कारोबार गरेपछि...
पुनर्जीवन पाए नीर शाहले, नौ दिन पछि अस्पतालबाट घर फिर्ता
काठमाडौं। नौ दिन अघि हृदयघातका कारण गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना भएका वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहलाई स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि सोमबार डिस्चार्ज गरिएको छ। उनलाई साँझ पाँच बजे अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। घर जान पाएपछि...
ब्राजिलले जिते फ्यानलाई पुनमको ब्रा उपहार
बलिउडकी मोडल तथा अभिनेत्री पूनम पाण्डे चर्चामा नआएको समय नै हुँदैन्। विश्वकप क्रिकेटदेखि सनसनी रुपमा मिडियामा आएकी यी मोडल अहिले ब्राजिलमा चलिरहेको विश्वकप २०१४का विषयलाई लिएर पुनः चर्चामा आएकी छन्। पूनमले यदि ब्राजिलले जितेमा...
श्रीकृष्णले रियल लाइफमा स्वेताको सिउँदो रङ्याए
काठमाडौँ, २३ असार । रिल लाइफमा दर्जनौँको सिउँदो रङ्याएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले रियल लाइफमा पहिलो पटक नायिका स्वेता खड्काको सिउँदो रङ्याएका छन् । लामो समयदेखि प्रेम सम्वन्ध गाँस्दै आएका श्रेष्ठ र खडु्काले सोमवार गौशालाको एक...
तेरियालाई काठमाडौंमा सम्मान
काठमाडौँ, २२ असार । भारतबाट प्रसारित जी टिभीको ‘डान्स इन्डीया डान्स’ कार्यक्रमको यसवर्षकी विजेता बुटवलकी तेरिया फौजा मगरलाई राजधानीमा सम्मान गरिएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले युनिक कम्युनिकेसनद्धारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई सम्मान...
« 1 … 417 418 419 420 421 … 430 »